စာပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 577
ဖိုးထက် မတ် ၁၊ ၂၀၁၂ အမှန်အတိုင်းသာဝန်ခံရလျှင် နိုင်ငံရေးဆိုတာ မစားကောင်းသောအသီးလို့ ကျနော်ခံယူခဲ့သည်။ ထိုအယူအဆအတိုင်း နေထိုင် ဖြတ်သန်း လာသဖြင့် ယခုခေတ် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဆိုလျှင် ဗိုလ်ချုပ်သမီးငယ် ဘမျိုးဘိုးတူ စိတ်ဓာတ်ရှိသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သိ သည်။ နောက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသူများထဲကမှ ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုသိသည်။ ဒါတောင်မှ ပေါ်ဦးဆိုသည့် သူ့နာမည် အရင်းကိုတောင် ကြီးမှသိခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ၈၈ ဆိုသည့်ခုနှစ်မှာ ကျနော်က ချာတိတ်ပေါက်စ။ ၈၈ အရေးအခင်းကြီးတုံးမှာ ကျနော်က မူလတန်းကျောင်းသား။ အရေး အခင်းကြီးမှာ ကျနော် မှတ်မှတ်ရရရှိခဲ့တာ နှစ်ခုဘဲရှိသည်။ တစ်ခုက ကျနော်တို့သားအမိ ဗွီဒီယိုသွားသွားကြည့်သည့် ဗွီဒီယိုရုံပိုင်ရှင်သမီး စင်မြင့်ထက်မှ တရားဟောခြင်းဖြစ်သည်။ ဖနောင့်တစ်ချက်ပေါက်ရင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမယ်ဆိုပြီး ငေါက်ငေါက်ငမ်းငမ်း ဟောပြော ခြင်းအား...
ကွန်စစ်ကောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၂ လာခဲ့ … အစ်ကိုလဲ လာခဲ့ ညီလေးလဲ လာခဲ့ အစ်မလဲ လာခဲ့ ညီမလေးလဲ လာခဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ လာခဲ့ မိတ်ဆွေတွေလဲ လာခဲ့ အားလုံးကို ပေါင်းစုမှ အင်အားတစ်ခုကို ရမှာပေါ့။ ယူခဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ယူခဲ့ လေးစားမှုကို ယူခဲ့ ရိုးသားမှုကို ယူခဲ့ မြင့်မြတ်မှုကို ယူခဲ့ ဇွဲလုံ့လကို ယူခဲ့ သတ္တိကို ယူခဲ့ အားလုံးကို ပေါင်းစုမှ စွမ်းဆောင်ရွည်တစ်ခုကို ရမှာပေါ့။ လာခဲ့ကြ အားလုံးလာခဲ့ကြ ယူခဲ့ကြ အားလုံးယူခဲ့ကြ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ညွန့်ထွေးဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၂ Myanmar Post ဂျာနယ် – ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 577 of 579«1...575576577578579»
နေချိုသွေး ● ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး https://t.co/Qpakx9rY4W about 8 hours ago ReplyRetweetFavorite